Gedit mushambadzi aida | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yeanonyanya kufarirwa mashandisirwo uye maturusi muGnu / Linux nyika yamiswa. Izvi zvataurwa nevezvenhau vakasiyana siyana munyika yeGnu / Linux kana mushandisi asimudza alarm. Gedit ndeyemavara edhitaini iyo inouya nekumisikidza mukuparadzira kwakawanda. Pamusoro pazvose, iripo mukugovera neGnome kana nharaunda dzakafanana, nepo Kate anowanzo kuve ari muPlasma.
Gedit yabviswa asi vagadziri vayo vekupedzisira vakaronga kuti chero mumwe mushandisi anogona kuenderera pamwe nekusimudzira mune iri kure kure ramangwana.
Gedit inobatsira kwazvo zvinyorwa zvemupepeti nekuti haisi chete chishandiso chakafanana neWindows 'notepad asiwo inoshandawo sekodhi kodhi ine simba iyo inobatsira vashanduri vazhinji kugadzirisa yavo kodhi. Gedit iri zvachose inoenderana neraibhurari yeGTK3 yazvino, asi ichokwadi kuti kana budiriro yayo ikaramba ichienderera, chirongwa ichi chinofanirwa kuve chinowirirana nedzimwe mitauro yekuronga. Rimwe basa iro Gedit ichafanirwa kuve naro mune ramangwana ndere kusanganisira matsva ekuwedzera uye kuchengetedza ese aripo kana zvirinani zvakakosha kwazvo mukati mechirongwa.
Gedit yamiswa zvinoreva kuti haizogashire matsva kana nhau asi hazvireve kuti icharega kushanda. Pari zvino Gedit inowanikwa mukugovera kwakawanda uye inoshanda zvachose uye inobatsira. Iko hakuna makomba akakomba ekuchengetedza uye inowirirana nemaraibhurari matsva eGTK3, ayo anowedzera chipo chechikumbiro ichi neramangwana kusvikira zvinhu zvachinja Zvichakadaro, vese vekare vagadziri uye chirongwa cheGnome vari kutsvaga timu inogona kuchengetedza iyi app.
Ini pachangu ndinofunga kuti Gedit ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anoshandiswa zvakanyanya Gnu / Linux kunyorera zvese, izvo zvichaita pamberi pekubata kwekutarisa, mugadziri anotora chishandiso ichi. Kana mapurojekiti akaita saUbuntu Kubata kana Kubatana 8 atora nekukurumidza, pachave nemumwe munhu weGedit Iwe haufunge kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Gedit mushambadzi aida
Zvakajairika, uchiona marara avakaita neGedit (uye akawanda akawanda mapakeji). Ingotarisa Pen muMate uyezve kuGedit muGnome3.
Nekusava nebasa kwekureruka, zvishandiso zveGnu / linux zvishandiso zvakaiswa.Tenda kunaka isu tine maforogo,
Antonia caracuel akadaro
Ndeupi musiyano uripo pakati pemashizha, peni, kana gedit? Kana ivo vakafanana zvekuti dzimwe nguva ndinofunga ivo zvakafanana mashandisiro ane rimwe zita.
Pindura Antonia Caracuel